एनआरएनका डाक्साप हावा वेबसाइटमा शृङ्खलालाई भोट माग्दै – MySansar
एनआरएनका डाक्साप हावा वेबसाइटमा शृङ्खलालाई भोट माग्दै
Posted on November 24, 2018 by Salokya
कसलाई केको धन्दा, कुन्नि के जातिलाई केको धन्दा भने झैँ एनआरएन अर्थात् गैर आवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. बद्री केसीलाई भोट माग्ने ध्याउन्ना लागेको रैछ अहिले। एनआरएनको एउटा इमेल ग्रुपमा मेरो पनि ठेगाना रहेछ। त्यसमा डाक्सापले देशबाहिर रहेका नेपालीको एकताको शक्ति देखाउन आह्वान गरेका रहेछन्। केका लागि भनेको त मिस नेपाल शृङ्खला खतिवडाका लागि अनलाइन भोटिङ गर्नका लागि रे। एकताका अस्कर अवार्ड जिताउनका लागि भनेर पनि अनलाइन भोटिङ आह्वान गरिएका थिए। पढ्नुस् पुरानो ब्लग- अनलाइनमा भोट हाल्दैमा ‘झोला’ले अस्कर जित्दैन साथी हो, कुरा बुझौँ ! नेपालीहरुले आँखा चिम्लेर ड्याम कि ड्याम भोट दिएका थिए। तर त्यो हावा वेबसाइटमा भोट गरेर केको अस्कर जित्नु!
अहिले एनआरएन डाक्सापले पनि एकताको शक्ति गलत ठाउँमा देखाउन आह्वान गर्नुभएछ। मिस वर्ल्डको आधिकारिक वेबसाइटमा नभई एउटा इन्डोनेसियाली हावा वेबसाइटमा अनलाइन भोटिङ गर्न उनले निर्देशन दिएको देखियो।
हेर्नुस् उनको इमेल जस्ताको तस्तै
एनआरएनका डाक्सापले नबुझेको कुरा-
-missworldvote.com मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको आधिकारिक वेबसाइट हैन। यो साइटमा अनलाइन भोट हालेर मिस वर्ल्डको भोटिङमा केही लछारपाटो लाउँदैन।
-उनले इमेलमा लेट्स मेक शृङ्खला मिस वर्ल्ड २०१८ लेखेका छन्। अनलाइन भोटिङले मिस वर्ल्ड बन्ने होइन।
त्यसो भए भोट कसरी दिने त?
मिस वर्ल्डको आधिकारिक वेबसाइट missworld.tv हो। वेबसाइटबाट आफ्नो सोसल मिडियाबाट लग इन गरी भोट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी mobstar app डाउनलोड गरी त्यसमार्फत् पनि भोट गर्न सकिन्छ।
शृङ्खला आफैले पनि भोट गर्ने तरिका यसरी प्रष्ट राखेकी छिन्
तर हाम्रा एनआरएनका डाक्साप चाहिँ हावा वेबसाइटमा भोट माग्दै हिँड्नु भएछ नेपालीको एकता भन्दै। एकता ठीक ठाउँमा नपर्दा ए, कता? हुन पुग्ला है होस गरौँ।
5 thoughts on “एनआरएनका डाक्साप हावा वेबसाइटमा शृङ्खलालाई भोट माग्दै”
Pingback: नेपालीले मरीमरी गरेको भोट काम लागेन, मिस वर्ल्ड हेड टु हेड च्यालेन्जमा शृङ्खला सिंगापुरेसित पराजित « Mysansar
हाम्रो देस को बिकास त अब मोबाइल बात मात्र होला जस्ताे देखियोत ।
NRN मा डाक्टर साहेबहरु त कुन्नी ? डाका साहेबहरु चाहिँ देशै पिच्छे बग्रेल्ती भेटिन्छन् क्यारे ।
Laxmi Dawadi says:
आफ्नो काम छैन र भोट हालेर बस्न?
मैले missworld को पार्य सबै युटुब अपडेट हेरिरहेको छु जजले प्रत्य्के पटक भिडियोको अन्तमा ४ वटा plate form को नाम बताउदैछन फोटोसहित र सोही भिडियोको लिन्कमा पनि राम्रो सङ्ग लेखेको छन तर नेपालीहरु हिजो सम्म गलत लिन्कमा भोट हाल्दैथिए अनि आज दुइटामा मात्रै भोट हाल्दैछन जबकी हाल्ने पर्ने चार वटैमा हो । तलको व्याख्या हेर्नोस –
तलका चार तरिका बाट भोट गर्नुपर्छ!
नोट: अधिकारिक रुपमा माथी दिएइको ४ तरिका मात्रै भोट गर्ने विधि हुन अन्यमा vote नगर्नु होला!